Ma hogaamin baa Ina Adeer ka qaad oo Ina Adeer u dhiibo ? | Puntlandnow.com
Feb 24th, 2015 – by Warqabadka Puntlandnow0
Cabdinaasir Biixi Soofe
Waayihii u danbeeyay Siyaasada Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali “Gaas” ayaa ahayd mid uu kula soo bareeray Ina Adeer ka qaad oo Ina Adeer ku bedel !!!! taas oo ahayd mid fasirkeedu yahay halka uu ka taagan yahay Madaxweynuhu ku dhaqanka Qabyaalada iyo Heyb sooca .
Madaxweynaha Puntland oo ahaa Nin laga filayay Isbadelo Siyaasadeed Iyo kuwa Dhaqaale, ayaa hada u muuqda mid ku can baxay ku dhaqanka Qabayaalada Iyo Eex aan loo meel dayin ka dib markii uu jeebka kala soo baxay dhaqamo aan horey looga arkin hogaamiyaashii uga horeeyey ka arrimida Puntland.
Abdiraxmaan Xaaji Xasan
Tusaale ahaan ka dib markii uu iscasilay Agaasimihii hay,adda ciidanka badda Puntland Cabdinaasir Biixi Soofe ayuu Madaxweyne Gaas bedelkiisa shaqadaas u dhiibtay Abdirxmaan Maxamuud Xaaji Xassan, oo ay Ilmadeer soke yihiin halka uu horey Xilka uga qaadey Abdinaasir Biixi Soofe oo isna ay Ilmadeer yihiin .
Abdiraxmaan Xaaji Xasan ayaa ku sugan Gothenburg Sweden waxayna wararku sheegayaan inuu heysta Warqada uu ku magacaabay Abdiwali Ali Gaas, .
Sidoo kale Cabdiweli Gaas ayaa u magacaabay todobaadkii horre Agaasimaha hay,adda PMAC “Puntland Main Action wiil ay ilmo adeer yihiin xilli uu shaqadaas baneeyey Agaasimaha cusub ee uu u magacaabay hay,adda sirdoonka Puntland ee PIA Mr Khaatumo .
Sida muuqata Cabdiweli Gaas Madaxweynaha Puntland waxa uu si toos ah u dhumiyay Kalsoonida Shacabka Puntland xilli laga arkayo waayahaan danbe ficilo fool xun oo muujinaya ku dhaqanka qabyaalada iyo eexda indho la,aanta ah taas oo meesha ka saareysa hadalkii uu ku sheegey hadda ka hor “ Wiilka Buuhoodle Baran Iyo Baargaal baan simayaa,
FG:- Puntlandnow waxay dadaal ugu jirtaa soo bandhigida dikreetooyinkii kazoo baxay Xafiiska Cabdiweli Gaas tan iyo markii loo doortey Hogaaminta Puntland.